IJocasta ephuma ku "Oedipus King" - I-Jocasta's Monlogue
Le ngqungquthela yamabhinqa ivela kwi-Greek play u- Oedipus King , i-Sophocles eyintlekele edume kakhulu.
Olunye ulwazi oluyimfuneko
U-Queen Jocasta (uYo-KAH-stuh) ungomnye wabalinganiswa be-mythology yamaGrike. Okokuqala, yena kunye nomyeni wakhe uKing Laius (LAY-us) bafunda kwi- Delphic Oracle (uhlobo oluthile lomgcini-mlando) ukuba umntwana wabo osanda kuzalwa uzimisele ukubulala uyise kwaye atshate unina.
Ngoko, emdlalweni wokuqala wokudlala ngabalinganiswa ukuze baphuphe iFate, bahlaba iinyawo zabo iintsana ukuze bazibophe kunye kunye nokushiya umntwana entlango ukuba afe.
U-Jocasta akakwazi ukuba umalusi onomusa uyasindisa umntwana wakhe. Usana lubizwa ngokuba yi-Oedipus (ED-uh-pus) - oku kuthetha ukuba ama-ankle avuyiweyo - ngabazali bakhe abamkelayo, uKumkani uPolybus (IPAH-lih-ibhasi) noM Queen Merope (Meh-RUH-pee) basemzini waseKorinte.
Xa u-Oedipus ekhula, engazi kakuhle ukuba "wayengumseli," ufunda ngesiprofeto esichazela ukuba uya kwenza bobabini i-patricide kunye nentsholongwane. Ngenxa yokuba ukholelwa ukuba esi sibikezelo sisebenza kwiPolbus no-Merope, abazali abayithandayo, ngokukhawuleza bashiya idolophu bayakholelwa ukuba unokuphepha loo nto ibuhlungu. Le yimizamo yesibini yomdlalo ngumlingisi wokusabalalisa iFate.
Uhambo lwakhe lokuphepha luye waya kwisixeko saseThebes . Xa esendleleni apho, uhamba ngokugqithiswa yinqwelo yekosi ekhukhumeleyo.
Lo kumkani uvele nje ukuba nguKing Laius (ubaba ka-Oedipus we-biological). Balwa kwaye bacinga ntoni? U-Oedipus ubulala ukumkani. Isiprofeto Isiqendu 1 sazaliseka.
Ngesinye isikhathi eThebes, i-Oedipus isombulula isithandwa esilondoloza iThebes kwiSphinx enesithakazelo kwaye ngoko uba ngukosi entsha yeThebes. Ekubeni u-king waphambilini wafa kwisiganeko somsindo wamandulo, ngenxa yezizathu ezithile akekho oye wadibanisa no-Oedipus, umfazi wamanje u-Jocasta ungumhlolokazi kwaye ufuna umyeni.
Ngoko u-Oedipus weds udala kodwa u-Queen Queen Jocasta omhle. Eqinisile, utshata nomama wakhe! Kwaye ngaphezu kweminyaka, bavelisa abantwana abane. Isiprofeto Isiqendu sesibini sagcwaliseka - kodwa phantse wonke umntu, kuquka u-Oedipus ngokwakhe, akahlali engazi zonke iinjongo ezithintekayo zokukhohlisa i-Fate.
Ngaphambi nje kokuqala kwesigidimi esingezantsi, iindaba zifikile ukuba ukumkani u-Oedipus ukholelwa ukuba uyise ufile-kwaye kwakungekho esandleni sika-Oedipus! I-Jocasta iyavuya kakhulu kwaye ikhululiwe, kodwa i-Oedipus isakhathazeka yingxenye yesibini yesiprofeto. Umfazi wakhe uzama ukunciphisa ukwesaba komyeni wakhe (ngubani unyana wakhe - kodwa akayikucinga oku okwamanje) kule ntetho.
Kutheni kufuneka umntu ofayo, umdlalo wamathuba,
Ngaphandle kokuqinisekiswa kwangaphambili, soyika?
Eyona nto ihlala ubomi obungakhathali ukusuka kwisandla ukuya emlonyeni.
Lo mtshato kunye nonyoko ungayesabi.
Kungaphi na amathuba ukuba ngamaphupha indoda
Utshatile unina! Lowo ongaboniyo
Iinjongo ezinjalo zobungqina bobuchopho zihlala zikhululekile.
Bona enye inguqulelo ye-monologue efanayo kwikhophi yeskripthi eguqulelwe ngu-Ian Johnston. (Fumana umgca 1160.) Le nguqulelo yinto yanamhlanje kuneyona ingentla kwaye iya kunceda uqonde ulwimi oluphakamileyo. (Kukwafanelekile ukujongwa kule nguqulelo yomdlalo wee -ologi ezongeziweyo zeJocasta.)
Abaphengululi abaninzi baseFreudy baye baqwalasela ngokugqithiseleyo le ngcaciso emfutshane. Funda phezulu kwi-Complex ye-Oedipal Complex kwaye uya kuqonda ukuba kutheni.
Eli nqaku liqule iinkcukacha ezininzi malunga nabalinganiswa.
Ukuba ufuna ukufunda okungakumbi malunga nomdlali wezemidlalo waseGrike, uSophocles, funda eli nqaku .
Nantsi ingcaciso emfutshane, ephakamileyo yebali lika- Oedipus King .
Le vidiyo ixelela ibali le-Oedipus kwii-Eight Minutes.
Le nxu lumene ne-movie epheleleyo ye-King Oedipus .
Kule vidiyo, unokujonga umveliso opheleleyo we-1957 womdlalo obizwa ngo- Oedipus Rex. (Qaphela ukuba umlingisi ubhengeze igama lomxholo wecatshulwa njenge-EE-duh-puss, echanekileyo ngokuchanekileyo, kodwa abantu abaninzi banamhlanje bathi igama elithi ED-uh-puss.)
Isimo esivela kwi "Man and Superman" (Umthetho wesine)
I-Comedic Female Monologue evela "kwiCinema Limbo"
I-Medea's Monologue yi-Euripides
Iintetho ezintathu zeFrentshi
Ziziphi izikhokelo zokususa i-Alert Alber?
Umculo womKristu womtshato
Ngaba Ndifanele ndifumane iSiqinisekiso soLawulo lwezeMpilo?